Optical Nkesa Socket Manufacturers na Suppliers | China Optical Nkesa Socket Factory
Optical nkesa anya (ebe) na-akpọ ọgwụgwụ onye ọrụ imechi igbe bụ mmasị dị ka mgbidi tinyekwa. Optical nkesa ihe e mere maka FTTH ngwọta na n'ezinụlọ ngwa anya netwọk. N'ịbụ kemfe FTTH ngwa, eriri ngwa anya anya na-eji kwụsị eriri ngwa anya udọ, kwachie udọ, pigtail udọ, na ihe nkwụnye dị ka ndị ahịa chọrọ.
FTTH eriri optic anya nwere ihe abụọ, ma ọ bụ anọ ọdụ ụgbọ mmiri, nke na-enye nwụnye nke otu ma ọ bụ abụọ eriri optic ihe nkwụnye, wuru na mgbe SC akara ukwu.
Jera si eriri optic nchupu igbe enye n'ibu nchedo, mgbanwe eriri ụzọ management na akara, mfe echichi n'ihi atụmatụ, emejuputa atumatu imewe nke niile FTTH Fiber optic nchupu igbe.
Jera awade niile FTTH eriri optic faceplates, na mkpa FTTH ngwa: Fiber Optic Pigtail, Fiber Optic Patch Ụdọ, Fiber Optic nkwụnye, Protection uwe, Fiber optic nchupu Box, Fiber Optic Splice mmechi, Idebe waya clamps, Down edu clamps, osisi brackets , osisi banding, Anchoring na Suspension clamps, cable slack nchekwa, wdg Anyị na-enye ọtụtụ dechara n'ezinụlọ ngwa anya akụkụ nke FTTH ngwa.
All ndị FTTH ngwa gabiga ọrụ ahụmahụ ule na okpomọkụ sitere na site -60 ° C ruo +60 ° C ịka nká ule, corrosion eguzogide ule, IP ule wdg
Eriri optic cable slack nchekwa igbe CSB-12
FTTH ngwa anya nkesa anya ODP-06
FTTH ngwa anya nkesa anya ODP-01H
FTTH ngwa anya nkesa anya ODP-04
FTTH ngwa anya nkesa anya ODP-02M